Lego တိုင်း Speed Champions 2021 နှင့်ကျော်လွန်ပြီးအနားယူထားကြ၏
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 430 Views စာ0မှတ်ချက် 76895 Ferrari F8 Tributo, 76896 Nissan က GT-R ကို NISMO, ၇၆၈၉၇ ၁၉၈၅ Audi Sport quattro S76897, 76898 ဖော်မြူလာအီး Panasonic Jaguar ပြိုင်ကား GEN2ကားနှင့် Jaguar I-PACE eTROPHY, 76899 Lamborghini Urus ST-X နှင့် Lamborghini Huracánစူပါ Trofeo EVO, ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko, ၇၆၉၀၁ Toyota GR Supra, 76902 McLaren အဲလ်ဗာ, 76903 Chevrolet Corvette C8.R ပြိုင်ကားနှင့် ၁၉၆၈ Chevrolet Corvette, 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A, 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R, Lego, Lego Speed Champions, မကြာခင်အနားယူတော့မည်, Speed Champions
လှိုင်းလုံးကြီးရှစ်လုံးပါသောပထမလှိုင်းလုံး Lego Speed Champions ကားများသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အငြိမ်းစားယူရလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုနှစ်အစုံအများစုသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်မည်။
မသိတဲ့ကိစ္စတွေ၊ 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R (ပြန်လည်သုံးသပ်၂၀၂၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်နေဝင်ချိန်သို့မောင်းနှင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောဒုတိယမြောက်လှိုင်းလုံးကြီးများသည်အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ခွဲခန့်အနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ Brick Fanatics'ရင်းမြစ်များ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်အတွက်ကောက်ဖို့အချိန်အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် Speed Champions အစုံ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းထက် ကျော်လွန်၍ မရရှိနိုင်သောကြောင့် ၂၀၂၀ ဖြန့်ချိချက်များကိုပိုမိုအရေးတကြီးလိုအပ်သည်။ 76895 Ferrari F8 Tributo အပြင်အဆင်၏ပထမဆုံး Lambos ၌ 76899 Lamborghini Urus ST-X နှင့် Lamborghini Huracánစူပါ Trofeo EVO.
ဒီမှာစာရင်းအပြည့်အစုံပါ Speed Champions အငြိမ်းစားယူမည့်အချိန်ကိုစီစဉ်သောစင်များပေါ်တွင်၎င်းတို့အားစုထားသည်။ ဤရက်စွဲများကိုပြောင်းလဲရန်တာဝန်ရှိသေးသည်၊ သို့သော်ထုတ်ဝေချိန်၌၎င်းတို့သည်တိကျသည်။
76896 Nissan က GT-R ကို NISMO
၇၆၈၉၇ ၁၉၈၅ Audi Sport quattro S76897
76898 ဖော်မြူလာအီး Panasonic Jaguar ပြိုင်ကား GEN2 ကားနှင့် Jaguar I-PACE eTROPHY
76899 Lamborghini Urus ST-X နှင့် Lamborghini Huracánစူပါ Trofeo EVO
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 2023
တစ်ဦးအပြည့်အဝစာရင်း Lego ၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်စင်ပေါ်မှထွက်ခွာရန်အစုံ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
← Lego တိုင်း Monkie Kid ၂၀၂၁ တွင်အငြိမ်းစားယူရန်သတ်မှတ်သည်
LEGO သည် Harry Potter နှင့် Deathly Hallows အတွဲများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်သည် →